”Waa hareereeysan nahay halisna waa ku jirnaa!!” – Kenya oo ka walaacsan isbahaysi ay sheegtay inuu ka dhexeeyo Somalia-Itoobiya-Eritrea | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waa hareereeysan nahay halisna waa ku jirnaa!!” – Kenya oo ka walaacsan...
”Waa hareereeysan nahay halisna waa ku jirnaa!!” – Kenya oo ka walaacsan isbahaysi ay sheegtay inuu ka dhexeeyo Somalia-Itoobiya-Eritrea
(Hadalsame) 17 Juun 2019 – Aqoonyahan Kenyan ah ayaa qoray maqaal dheer oo uu cinwaan uga dhigay, ”isbeddelka awoodeed ee Geesku wuxuu nabaad guurinayaa saamayntii Kenya!” Wuxuu ku bilaabay:
Nabadda kasoo iftiimaysa Geeska Afrika, kaddib burburka ku socda nidaamyadii kali taliska ahaa, waxaa ka dhashay isbedel cusub oo dhanka awoodda ah, taasoo halis wayn ku ah saamayntii ay Kenya gobolka ku lahayd 50-kii sano ee tegey.
Kenya ayaa iyadoo ka faa’iidaysanaysa colaadda Somalia iyo Itoobiya waxay 1963-kii Itoobiya la saxiixatay heshiis istaraatiji ah oo ku dhisan in la xakameeyo wax lagu sheegay isballaarinta Somalia oo ay dabcan labadan dalba dhul ka haystaan.
Ninka maqaalkan qoray oo ah Professor Peter Kagwanja oo Kenya u dhashay ayaa MURUGO ku tilmaamay inay haatan sii dhamaanayso rajadaasi, marba haddii ay gobolka Geeska nabad iyo wada noolaansho kasoo ifayaan, gaar ahaanna dalalkii is nebcaa ee Ethiopia, Eritrea iyo Somalia ay u muuqdaan kuwo isbahaysi samaysanaya taasoo meel cidlo ah kusoo tuurtay Kenya, sida uu sheegay.
Kaddib markii Madaxwayne loo doortay Mohamed Abdullahi (Farmajo) 2017, waxaa dib usoo noolaaday isla sarrayntii isir ee Somalia iyo aragtidii Soomaali wayn oo noqotay halka laga tixraacayo xiriirka ay Somalia gobolka la yeelanayso.
Kaddib Luulyo 2018, Farmaajo wuxuu ku biiray Afwerki iyo Abiy oo ay ku midoobeen aragti la magac baxday ”Geeska Cusub” (NEW HORN), taasoo isku xireeysa 3-da dal.
Aragtidan Geeska Cusub waxaa calanka u sida laba qoowmiyadood oo dhan qaraabo ka ah waana “isbahaysigii Cushitic-ga” oo ka dhexeeya Oromo iyo Soomaali, kaasoo meesha ka saaraya ujeedkii IGAD oo ahaa urur ay isticmaalayeen Kenya iyo Itoobiya, si ay Somalia u xakameeyaan, isla markaana galaangal diblomaasiyadeed ugu yeeshaan Midowga Afrika.
Waxaa intaa dheer, in dalalka Ethiopia iyo Eritrea — oo haatan haya ciidamo badan oo kasoo baxay dagaalkii ka dhexeeyay ay doonayaan inay Farmaajo ka caawiyaan inuu ka takhaluso Al Shabaab, taasoo meesha ka saaraysa doorkii AMISOM oo ay ku jireen Kenya, Uganda, Djibouti iyo Burudi.
Ku darsoo, Dr Abiy oo 42-jir ihi wuxuu kordhiyay awoodda jilican (soft power), iyo saamaynta sahlan ee ay Itoobiya ku leedahay gobolka, isagoo qariyay doorkii Kenya oo ah inay ahayd dal ka shaqeeya nabadda gobolka. Tusaale wuxuu ku baxay xasaradda Suudaan iyo muranka badda ee Somalia iyo Kenya.
Ugu dambayn, waxaa jirta arrin la xiriirta waxyaabaha aannu soo sheegnay oo ah inay Somalia ku dhiirratey inay sheegato biyaha Kenya, taasoo halis iyo caqabad jiritaan ku ah Kenya, ayuu leeyahay qoraha maqaalku, waayo haddii Somalia dhulkaa loo xukumo waxay Kenya noqonaysaa dal aan waxba dhaamin ”bad-xiran.”
Professor Peter Kagwanja waa la taliye hore oo dowladda Kenya ah haatan wuxuu Xoghaye Fulineed ka yahay Machadka Africa Policy institute (Kenya).
Waxaa soo Ururiyay: Maxamed Xaaji
Previous articleCabsi soo wajahdey Soomaalida Kenya & Uganda (Maxaa soo kordhay?)
Next article”Kuu joojin mayno!” – Turkiga oo horraanta bisha soo socota helaya gantaalaha S-400 & Maraykanka oo u gooddiyey!